Alle iyo Masayrka maxaa kala haysta?! – Kaasho Maanka
Ilaaha diimaha Ibraahiimiyadu waxyaabo badan ayuu aadanaha la wadaagaa oo ay ka mid yihiin xitaa dareenno aanu aadanuhu la wadaagin noolaha kale, meelo badan oo Quraanka, Baybalka iyo Tooraahba kamida waxaan ku aragnaa Alle oo la leeyahay maanta waa maalmihiisii oo wuu caraysan yahay.
“…..فقد با بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير” , “غضب الله عليهم ولعنهم وأعدلهم جهنم ….”
Sida oo kale waxaan aragnaa Alle oo farxay, qoslay, mashquulay, masayray, kibray oo sanka taagaya, markaa ma filaysaa Alle oo fekeraya, xisaabtamaya ama caajisay? Macquul! Bal Alle iyo dareenka masayrka maxaa kala haysta?
Dareenka masayrku mar waa la ammaanaa, se sida badan lama jecla, ninka aadka u hinaasiga badan ee subaxdii eeg-eega wax raad xalay guriga soo galay dumarku ma jecla, ragguna aad bay u neceb yihiin, naagta aadka u masayrka badan ee ninka shaararkiisa ur-ursata bal inay cadar naageed ama waxyaalo dumar la xiriira ka soo kamkamayaan, badanaa labadaasi waxay noqdaan kuwo bulshada ka takooran oo mar walba farta la iskugu fiiqo. Haddaba, masayrka aan u soconnaa ma aha masayrka nin iyo haweeney ee waa Alle ma masayraa, xaggee buu se dareenkiisaa masayrku gaarsiisan yahay?
Sharciyad walba oo uu Ilaahay cirka ka soo dejiyey waxay ku yuururtaa labo eray oo kooban oo ah “War i caabudaay”. Tan iyo intii dunida la taagay sida ay inoo sheegaan diimaha sheegta inay cirka ka soo dheceen wuxuu Alle ku hadaaqayey “War keligay ha la i caabudo, war anigaa cibaadada xaq u leh”. Alle beelo negi oo nabad ku daaqaya ayuu cagta mariyey oo danbas ka dhigay, qaar uu dhagaxyo cirka kaga soo gano oo shiid dabada u qabto, qaar uu bado iyo webiyo ku faruuro, qaar uu dhegaha kaga qayliyo iyo kuwo uu dabaylo iyo duufaanno ku sallido. Sababta uu Alle sidaas u yeelayna wuxuu u aaneeyey in aanay beelahaasi isaga caabudin oo ay Alle dulmiyeen cibaadadii uu isagu mudnaa ay cid kale la aadeen.
Horta Alle saw isagu aadanaha ma abuuran? Haddana, saw ma aha Alle ceeb ka nasahan oo dhammaystiran waxbana u baahnayn. Nacam! Haddaba, Alle muxuu uga baahan yahay cibaadada uu aadanuhu isaga caabudayo? waxba ayay ku jawaabeen, haddaba muxuu Alle u sheegtay beelahaas oo uu cagta u mariyey maadaama ay sameeyeen wax aan isaga waxba u dhimayn, oo wax yeelayn? Asalkaba, aadanuhu ma dulmin karaa Allihii isaga abuuray? May oo Alle aadanuhu waxba ma yeelo karo, haddana saw kan Alle yiri maaha “ إن الشرك ظلم عظيم” Alle oo wax lala wadaajiyaa waa dulmi weyn”, Alle waa la dulmiyaa, weligeedna la dulmin jiray, haddana Alle waa dhammays oo waxba lama yeeli karo bal adigu isku kay qabadsii?
Aadana iyo abuur kale oo diimuhu keligood ka warramaan balse cilmiga sayniska ahi xaqiijin jiritaankooda ilaa maanta oo jin la yiraahdo Alle wuxuu u abuurtay in ay isaga keligii caabudaan “وما خلقت الجن والانس الاليعبدون” “oo uma aannan abuurin Jinka iyo Aadanaha inay i caabudaan moojaanee”, Alle waa mid kibir iyo qabweyni badan oo baahi u qaba in mar walba loo foorarsado oo wejiga dhulka loo dhigo, haddana Alle wuxuu leeyahay waxba idinkaga ma baahni!
Allow doc iskugu bayr oo haddii aad cibaado u baahan tahay waannu ku caabudi, haddii aysan cibaadadu waxba kuu tarahayn, cibaado la’aantuna waxba ku yeelahayn, hadde Allow maxaad naga kadeedaysaa?Ummadaha Alle halaagayna haddii ay samaynayeen wax aanan isaga waxba u dhimayn muxuu u sheegtay. Adiga haddii ay ciyaal yaryari gurigaaga hortiisa kubbad ku ciyaaraan oo qayladoodu ay ku dhibayso waad baxaysaa oo waad iska erinaysaa carruurta, haddii se aanay waxba ku yeelayn kubbaddoodu hadde waad iska deynaysaa carruurtu ha iska baashaalaane, Allena waa sidaas oo kale oo haddii shirkigu wax yeelayo wuu halaagayaa, haddii aanu waxba u dhimayna wuu iska deynayaa dadkuna dhoobadooda ayay iska qasanayaan.
Adigu ma taqaannaa dareenka hinaasiga? haddii canug yar oo aan qaangaarin oo aad adeer u tahay gurigaaga joogo oo xaaskaagu dhabta ku hayso, waxaad u arkaysaa hooyo wanaagsan oo barbaarinaysa ubadkaaga, haddii se aad aragto nin weyn oo aadan aqoon oo deriskaaga ah iyada oo la faro-kaciyaaraysa oo ay u dhaqmayaan si xasaasi ah, waxaa ku galayada dareen. Saw ma aha?
Allena haddii uu og yahay in waxan isaga sokadii la caabudo ay yihiin looxyo aanan waxba tarayn muxuu uga hinaasinayaa oo u leeyahay waxaas ka dheeraada, illeen waa sida inankaas yar oo aanan waxba yeeli karin reerkaagee. Haddii se uu Alle yahay nin hinaasi badan wuxuu la mid yahay adiga oo ka hinaasiya sawirka qoraa ay xaaskaagu akhrisato buugtiisa oo ay xiisayso qoraalkiisa, dabadeedna inta ay u bogtay ay sawirkiisa soo iibsatay oo derbiga ku dhejisay. Innaga oo dhami waynu samaynaa in aynu derbiyadeenna ku dhejinno qoraa aynu xiisayno, jilaa filim oo aynu aflaamtiisa la dhacnay ama siyaasi aynu hanaankiisa maamul madaxa u ruxnay, markaa waad aragtaa in wuxu uu yahay sawir aanan waxba tari karin, waxba yeeli karin ee kama hinaasin kartid saw maaha? Haddaba Alle muxuu uga masayraa looxyaha iyo farshaxanka ay qolyahani caabudaan ee aan waxba Alle yeeli karin, waxbana u dhimi karin.
Sharciyadaha diinuhu waxay farageliyaan wax walba oo ruuxa noloshiisa ku saabsan, oo ay ku jiraan waxyaalo aad u liita; sida lugta aad suuliga ku gelaysid, marka aad xaaskaaga isu galmoonaysaan erayada aad akhrinaysid, iyo sida ay gabadhu dhiigga caadada uga mayran lahayd. Haddana, ma aan aragno diimuhu iyaga oo ka hadlaya waxyaabaha waxaas ka waaweyn oo aanay ummaddu ka maarmin, sida fariisinta miisaaniyadda dhaqaale ee waddanka, hannaanka waxbarasho, booliska, sharciyadaha bulshada, caafimaadka iyo wixii la mid ah. May ma aragno, waxyaabahaas waaweyn oo dhan dadku iyaga ayaa dejista, Allaha weynina wuxuu u dejiyaa sidii uu ninku kaadida iskaga nadiifin lahaa ama sida uu u nadiifin lahaa ilkihiisa.
Allow ceeb ka nasahanide maxaa meel daran ku dhigay! Allow hinaasiga iska daa, oo waxyaalahaas yar-yar ka kor, oo noqo nin dunidaa uu abuurtay maamula oo waxyaalaha yaryar ee aan waxba ku yeelayn ee laga yaq-yaqsoodo iska daa oo ku mashquul arrimaha waaweyn ee maamulka dunida.
Dhabta iimaanka (hanuunka)
Qaybta: Awood sare, Diinta Islaamka, Quraan
Saddex aayadood oo Qur’aanka kariimka ah ka mid ah bay midi sheegaysaa in hanuunku uu yahay wax uu Eebbe sameeyo, hanuun la’aantuna ay sidaas oo kale tahay. Aayad kale waxa ay sheegaysaa in hanuun la’aanta uu shaydaan sameeyo, aayad saddexaadna waxa ay caddaysay in uu qof kastaa isagu masuul ka yahay in uu hanuuno iyo in kale. Waa mustaxiil in saddexdaas ayadood ay isku meel ka yimaadeen, haddii...
Hooyadaa ayaa ka naxariis badan Ilaahaaga!
W/Q: Waris Diiriye
Dhammaan diimaha samaawiga ahi Ilaahooda waxay ku tilmaameen inuu yahay mid naxariis badan, caddaalad badan oo neceb inuu ku xadgudbo addoomihiisa, sidoo kalena aanan aqoon eexashada iyo qaraabo kiilka, Ilaahay waa mid ku qiimeeya addoonkiisa falalkiisa adduunka oo ku xisaabiya.. Ilaahay waa mid ciqaabta u soo hormariya kuwa amarkiisa qaadan waaya ee ku gacan saydha nimanka uu farriintiisa u soo...
Marka koowaad waxa aynu wada ogsoonahay shaki la'aan in sameysanka roobku uu ku yimaado uumi-baxa biyaha badda, waxaana u sabab ah marka ay fallaaraha cadceeddu ku dhacaan oogada sare ee biyaha in ay sameeyaan uumi-bax (Evaporation), balse uumigaasi ma ahan mid aynu indhaheena ku arki karno ilaa inta ay gaarayaan Atmosphere-ka isuna beddelayaan daruuro habka loo yaqaan (Condensation), intaas ka...
Baron d’Holbach iyo doodda diidmada Eebbe
Qaybta: Awood sare, Falsafad
Inkasta oo doodda jiritaanka Eebbe ay wax badan soo jirtay oo xattaa ay ka horraysay diimaha bariga dhexe, sida diinta islaamka, kiristaanka iyo waliba diinta yahuudda, hadana in si cad looga horyimaado oo shaki la galiyo waxay ahayd arrin adag oo aan lagu dhiirran karin wixii ka horreeyay qarnigii 18aad. Dadkii isku dayay in ay arrintaas dood ka keenaan waxay bixiyeen qiimo wayn waxay la kulmeen...
Ilaahay iyo dadka kee wax abuuray?
Fulaynimada ama cabsida laga cabsanayo waxa dhici doona geerida kadib iyo waxyaabaha ay xal u waydo maskaxdu ayaa keena oo abuura khuraafaadka jiritaanka Illaahyada. Markasta oo garashada dadku korto cilmiga iyo tiknoolajiyaduna heer sare gaadho waxa sii yaraanaysa ugu danbayna meesha ka baxaysa baahida loo qabo Illaahyada. Qarnigii toddobaad iyo maanta isku baahi uma qabno Illaahyada.
Haddii qolo aanan aaminsanayn cuf-is-jiidadka iyo qolo aaminsan ay doodaan, waxaa la samayn karaa in inta la kaxeeyo la geeyo daar aad u dheer dusheeda halkaasna laga soo tuuro dhamaantood, sidaasna ay ku geeriyoodaan. Aaminaaddoodii iyo aaminaad-la’aantoodiina wax macna ah samayn mayso, waxbana ka badali mayso saamayntii cuf-is-jiidadku lahaa. Cuf-is-jiidadku waa xaqiiq ka madax banaan...
W/Q: Abshir Garaad Cumar 9th August 2018